ပညာရေး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုသမှုနှင့်မူဝါဒဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများကိုမြှင့်တင်ခြင်းအပေါ်မှတ်ချက် - ICD-11 အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြiveနာများ (Kraus et al ။ , 2018) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
ပညာရေး, ခွဲခြား, ကုသမှုနှင့်အပေါ်မူဝါဒရေးရာချမှတ် Commentary မြှင့်တင်ရေး: (။ Kraus et al, 11) ကို ICD-2018 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ
1လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်း, စိတ်ပညာ၏ Institute မှ, သိပ္ပံပိုလန်အကယ်ဒမီ, ဝါဆော, ပိုလန်
2တွက်ချက်အာရုံကြောသိပ္ပံ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာ Institute ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, San Diego မှတက္ကသိုလ် San Diego မှ,, CA, USA သို့များအတွက် Swartz ကိုရေးစင်တာ
* သတင်းထောက်ရေးသားသူ: မာတေယူချ် Gola, Ph.D; တွက်ချက်အာရုံကြောသိပ္ပံ, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ပျူတာ Institute ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်, San Diego မှတက္ကသိုလ် 9500 Gilman Drive ကို, San Diego မှ,, CA 92093 0559, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် Swartz ကိုရေးစင်တာ; ဖုန်းနံပါတ်: + 1 858 500 2554; Office ကိုဖုန်းက: + 1 858 822 7543; E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]edu
Potenza မာ့ခ် N.
3စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Neurobiology, ကလေးလေ့လာမြစင်တာနှင့် CASAColumbia, ဆေးပညာ၏ယေးလ်ကျောင်း, New Heaven, CT, USA ၏ဦးစီးဌာနများ
4Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ, New Heaven, CT, USA
Kraus et al အားဖြင့်စာ။ (2018) တွင်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သည် ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSBs) အတွက်ရောဂါရှာဖွေစံတွေ့ရမယ်။ (Clinician နှင့်လူနာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်) CSB နှင့်ဆက်စပ်သောပညာရေးဆိုင်ရာအားထုတ်မှု, နောက်ခံယန္တရားများနှင့် Subtype ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, ကိုယ်ပိုင်ကုသမှုမူဘောင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်လူမှုရေးအရအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း: ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ CSB လေးဒေသများများအတွက် ICD-11 အတွက်ရောဂါအပါအဝင်၏အလားအလာသက်ရောက်မှုအားဆွေးနွေးရန် နှင့်အရေးကြီးသောကာကွယ်တားဆီးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်ထိရောက်သောမူဝါဒများတိုးတက်။ ဤတရားလေးပါးဒေသများ၏တစ်ဦးချင်းစီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စိန်ခေါ်မှုများရှိပါတယ်, ကျနော်တို့ခေတ္တသူတို့ကိုဖော်ပြရန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။ ကျနော်တို့ကဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုတစ်ဦးပေးတဲ့ dialog ဆက်လက်ကူညီနဲ့ဒီဧရိယာထဲမှာရှေ့ဆက်ရွေ့လျားများအတွက်မူဘောင်များကိုပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
keywords: အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, hypersexual ရောဂါ, လိင်စွဲလမ်း, ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ICD-11
(ဒါချိတ်-ups ခေါ်) မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ, paid လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများအတွက်ရှာဖွေနေနှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအပေါ်ထိန်းချုပ်မအင်တာနက်တစ်ခုခေတ်တွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်လာခဲ့ကြပုံရတယ်။ နေ့စဉ်ဘုံနှင့်လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက် (အချို့တစ်ဦးချင်းစီအဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဤအသစ်သောပုံစံများကိုပြဿနာဖြစ်လာနှင့်ရှာကြံကုသမှုသတိပေးခံရဘူးသောညွှန်ပြGola, Lewczuk, & Skorko, 2016) ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ပေးထားသော, ထိုကဲ့သို့သော "လိင်စွဲလမ်း" အဖြစ်အသုံးအနှုန်းများအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာနှင့်အများပြည်သူဆွေးနွေးမှုအတွက်တည်ရှိ။ သို့သော်ဤဖြစ်စဉ်၌မြင့်လူမှုရေးအရေးပါမှုနှင့်အကျိုးစီးပွားရှိနေသော်လည်းနှစ်ပေါင်း compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSBs) ပွဲတစ်ပွဲ (စနစ်တကျသိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါခွဲခြားများ၏အနားသတ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့ကြKafka, 2014; Kraus, Voon, & Potenza, 2016; Potenza, Gola, Voon, Kor, & Kraus, 2017).
(CSBs, hypersexsuality နှင့်လိင်စွဲနှင့် ပတ်သက်. သိပ္ပံနည်းကျနှင့်လက်တွေ့ဆွေးနွေးမှုများဆယ်စုနှစ်များစွာမျိုးစုံစိတ်ကူးများထုတ်ပေးပြီ, ဒါပေမဲ့တခြားစိတ်ရောဂါအပြုအမူတွေနဲ့ပုံမမှန်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတွက်အတော်လေးနည်းနည်း data တွေကိုသူတို့ကိုစမ်းသပ်ဖို့တည်ရှိGola & Potenza, 2018) ။ တစ်ဖက်တွင်လုံလောက်သောအချက်အလက်များသည် CSB ရောဂါ (သို့မဟုတ်) ဆက်စပ်ဆောက်လုပ်မှုများ [ဆိုလိုသည်မှာ hypersexual disorder (ပါ ၀ င်မှု) ကိုပါ ၀ င်ရန်အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။Kafka, 2010)] ၏ပဉ္စမ edition အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013), hypersexual ရောဂါတစ် DSM-5-related လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေး၏ရလဒ်များကိုရှိနေသော်လည်း (Reid et al ။ , 2012) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သတ်မှတ်ထားတဲ့စံတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကရောဂါရှာဖွေ entity ၏မရှိခြင်းသုတေသန, ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့် CSBs သက်ဆိုင်သောပညာပေးကြိုးပမ်းမှုများကိုနှောင့်နှေးကြပေမည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, CSBs ၏သိသာထင်ရှားသောရှုထောငျ့နားလည်သဘောပေါက်အတွက်အရေးကြီးသောမကြာသေးခင်ကတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပါပြီ။
Kraus et al ။ (2018) ICD-11 အတွက်ပါဝင်ဘို့အဆိုပြုအဖြစ် CSB ရောဂါများအတွက်စံဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာတော့လာမည့် ICD-11 အတွက်ပါဝင်ဘို့ CSB ရောဂါအဆိုပြုများအတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် CSBs များအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီ၏ရှုထောင့်ကနေတစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်; ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုပေး Clinician; ဒီခေါင်းစဉ်လေ့လာနေစိတ်ဝင်စားသုတေသီများ; နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမေးခွန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်နောက်ဆုံးမှာမူဝါဒကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုအကြောင်းကြားသင့်သောအဖြေကို, ကိုခံရကြ၏။ ကျနော်တို့ကဤလေးမျိုးဒေသများပေါ်တွင်ခေတ္တလက်ဆောင်အမြင်နှင့်ကျွန်တော်အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတန်ဖိုးရှိများမှာယုံကြည်စကားသံကိုအရေးအပါဆုံးကိစ္စရပ်များကိုချင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပြင်းထန်သော၊ ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းမှုများကိုအမြဲတစေအခက်တွေ့နေသောအခက်အခဲများသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်မှုများကိုကြုံတွေ့ရသူများစွာအတွက်၊ သူတို့ရဲ့ပြproblemနာကိုအမည်နှင့်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ တစ် ဦး ချင်းစီအကူအညီတောင်းခံနိုင်သောစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ (ဆိုလိုသည်မှာဆရာ ၀ န်များနှင့်တိုင်ပင်သူများ) သည် CSB များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ CSB များအတွက်ကုသမှုရှာကြံ 3,000 ဘာသာရပ်များကျော်ပါဝင်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေစဉ်အတွင်းကျနော်တို့ CSB ခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီအကူအညီနဲ့သူတို့ရဲ့ရှာကာလအတွင်းသို့မဟုတ် Clinician နှင့်အဆက်အသွယ်မျိုးစုံအတားအဆီးကြုံတွေ့ရကြောင်းမကြာခဏကြားရကြပြီ (Dhuffar & Griffiths, 2016)။ လူနာများထိုကဲ့သို့ပြဿနာများတည်ရှိ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုရှိပါတယ်, ဤလူတစ်ဦးချင်းစီသည်ကြားမှ (ကုသအစားလက်ခံသင့်တယ်အကြံပြုမပြည်နယ်, Clinician ခေါင်းစဉ်ကိုရှောင်ကြဉ်စေခြင်းငှါသတင်းပို့သည် CSBs အတ္တ-dystonic နှင့်ခဲခံစားရပေမည် ) မျိုးစုံအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ CSB ရောဂါများအတွက်ကောင်းစွာ-သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများ CSB ရောဂါ၏လက္ခဏာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အပါအဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာအားထုတ်မှုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေး, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ၏အခြားပံ့ပိုးပေးအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောအထွေထွေသမားအဖြစ်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအပါအဝင်အခြားအစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ (အလေးပေးထည့်ပြီး)
CSB ရောဂါ conceptualize နှင့်ထိရောက်သောကုသမှုပေးဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအပေါ်အခြေခံမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရပါမည်။ အခြားမော်ဒယ်များအဆိုပြုထားပြီအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ရောဂါခွဲခြားလက်ရှိအဆိုပြုလွှာ (အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013) ။ ကြောင်း CSB ရှယ်ယာစှဲနှင့်အတူအများအပြား features တွေအကြံပြုခြင်းဒေတာ (ရှိပါတယ်Kraus et al ။ , 2016), ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုတုန့်ပြန်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတိုးမြှင့် reactivity ကိုညွှန်ပြမကြာသေးမီဒေတာအပါအဝင် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016; Gola et al ။ , 2017; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse, & Stark, 2016; Voon et al ။ , 2014) ။ ထို့ပြင်ပဏာမဒေတာ (naltrexone, alcohol- နှင့် opioid-အသုံးပြုမှုမမှန်အဘို့အရိပ်လက္ခဏာနှင့်အတူတစ်ဦးဆေးဝါး, CSBs ကုသမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည်အကြောင်းအကြံပြုKraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015; Raymond, Grant, & Coleman, 2010) ။ တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ရောဂါရဲ့အဆိုပြုခွဲခြားရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ CSB ရောဂါများထဲမှပုံစံပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံသည်ဟုအကြံပြုဒေတာရှိပါတယ်, အထွေထွေလူဦးရေထဲကနေ Impulse ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားကြပါဘူး။ သူတို့ကအစားတိုးမြှင့်စိုးရိမ်ပူပန် (နဲ့အတူတင်ဆက်ထားပါသည်Gola, Miyakoshi, & Sescousse, 2015; Gola et al ။ , 2017), နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာများကိုပစ်မှတ်ထား pharmacological ကုသမှု (အချို့ CSB လက္ခဏာတွေလျှော့ချအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်Gola & Potenza, 2016) ။ ကသေးခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. ပြတ်သားကောက်ချက်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါနေစဉ်, ပိုပြီးဒေတာတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ (နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားထောကျပံ့ပေးဟန်Kraus et al ။ , 2016), နှင့်ပိုပြီးသုတေသနကအခြားစိတ်ရောဂါအခြေအနေများနှင့်အတူဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ် (Potenza et al ။ , 2017).
အခြားစိတ်ရောဂါအခြေအနေများနည်းတူ CSB ၏ရောဂါသည်ပံ့ပိုးမှုအမျိုးမျိုးသောယန္တရားများနှင့်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသည်။ CSB ပုံစံသည်ရောဂါသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူ့အကျင့်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (ဥပမာ - အခြားသူများနှင့်အန္တရာယ်များသည့်ကျပန်းလိင်သို့မဟုတ်အခကြေးငွေပေးသောလိင် ၀ န်ဆောင်မှု) တွင်အဓိကပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ တစ် ဦး တည်းသောအပြုအမူများ (ဥပမာ - မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း)၊ Efrati & Mikulincer, 2017) ။ ဒါဟာ (ယခင် Impulse နှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းမှဆက်စပ်စေခြင်းငှါ, အဆုံးစွန်သောအန္တရာယ်များအရက်သုံးအပြုအမူတွေများအတွက်အဆိုပြုပြီးပါပြီအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောဆက်စပ်ရှိခြင်းနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်မားဆက်စပ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်Coleman, 1991, 2015; Gola et al ။ , 2015; Stark & ​​Klucken, 2017); သို့သော်ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုတိုက်ရိုက်စာမေးပွဲအချက်ကိုခိုင်လုံမှု။
CSB ရောဂါနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှ Subtype များအတွက် Pharmacological နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုမဟာဗျူဟာဆန်းစစ်ရပါမည်။ လောလောဆယ်အထူးသဖြင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနဲ့တူအလားအလာ Subtype ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူ CSB ရောဂါအနည်းငယ်စနစ်တကျလေ့လာမှုများ, ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ (ရန်ပုံငွေအေဂျင်စီများထံမှထောက်ခံမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်Potenza, Higuchi, & အမှတ်တံဆိပ်, 2018) ။ Non-ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်လောင်းကစားရောဂါကဲ့သို့အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏လေ့လာမှုစိတ်ဓါတ်များ, စိုးရိမ်စိတ်, psychotic ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်အများဆုံးကိုအခြားစိတ်ရောဂါ do (ကဲ့သို့မမှန်လမ်းကိုအစိုးရမဟုတ်သောထောက်ခံမှုမခံမယူအယ်ဒီတာ့အာဘော်, 2018). CSBs နှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေးထားကျနော်တို့ (အပါအဝင်သော်လည်းမညစ်ညမ်း, အင်တာနက်ပံ့ပိုးသူနှင့်ဒီဂျစ်တယ် device ကိုထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့ကန့်သတ်) အစိုးရမဟုတ်သောအေဂျင်စီများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများ CSB ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအဓိကမေးခွန်းများကိုသို့သုတေသနလုပ်ငန်းကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးမျှော်လင့်ပါတယ် ရောဂါနှင့်၎င်း၏ Subtype, ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကြားနှင့် psychometrically အတည်ပြုစိစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်တူရိယာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, (အထူးသဖြင့်လူငယ်ထိတွေ့မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အလားအလာသက်ရောက်မှုများနှင့် CSBs နှင့်အတူပြဿနာများအတွက်အန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီကိုနေရာချခြင်းအလိုငှါအားနည်းချက်အချက်များ၏မှတ်ပုံတင်။ ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားမေးခွန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏အဆင့်ဆင့်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်ကာကွယ်တားဆီးရေး, ကုသမှု, နှင့်မူဝါဒအားထုတ်မှုတိုးတက်လာဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုခိုင်လုံ။ (အလေးပေးထည့်ပြီး)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်, ICD-11 အတွက်ပါဝင်ဘို့အဆိုပြုအဖြစ် CSB ရောဂါများအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေရှာတဲ့စံလူမှုရေးအရအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းဖြေရှင်းရန်ရှည်လမ်းခရီးဘို့အရေးပါတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ထားကြ၏။ addressing နဲ့ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းခံစားနေရပြီးလူဦးအနေနဲ့တိုးတက်လာသောနားလည်မှုများကို CSB ရောဂါရှိသူများကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူတို့အတွက်တိုးတက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသင့်ပါတယ်။
စာရေးသူဒေါက်တာ MG ဒေါက်တာ MNP နှစ်ဦးစလုံးအညီအမျှလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်များ၏ content မှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်များ၏ content မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခသတင်းပို့ပါ။ ဒေါက်တာ MNP အောက်ပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များသို့မဟုတ်လျော်ကြေးလက်ခံရရှိခဲ့သည်: သူအဘို့တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် RiverMend ကနျြးမာရေးအကြံပေးတော်မူပြီ ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, Mohegan Sun ကကာစီနိုများနှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှ (ယေးလ်မှ) သုတေသနထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်; စွဲ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်, ဒါမှမဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောစစ်တမ်းများ, Mail, သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းညှိနှိုင်းပါဝင်ခဲ့ပြီ လောင်းကစားခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များတွင်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအဘို့တိုင်ပင်တော်မူပြီ န်ဆောင်မှုများအစီအစဉ်လောင်းကစားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြဿနာများ၏ Connecticut ဦးစီးဌာနများတွင်လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်; အမျိုးသားကျန်းမာရေး၏ Institutes နှင့်အခြားအေဂျင်စီများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေမူပြီ edited သို့မဟုတ်ဧည့်သည်-edited ဂျာနယ်များသို့မဟုတ်ဂျာနယ်ကဏ္ဍများကိုမူပြီ ခမ်းနားကျည်, CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျနေရာများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်အားပေးတော်မူပြီ; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းကြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Snagowski, ဂျေ, Laier, C တို့, & Maderwald, အက်စ် (2016) ။ ပိုမိုနှစ်သက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။ Neuroimage, 129, 224-232 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.01.033 Crossref, Medline, Google Scholar
Coleman, အီး (1991) ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အသစ်သောအယူအဆများနှင့်ကုသမှု။ စိတ်ပညာ & လူ့လိင်ဂျာနယ်,4(2), 37-52 ။ Doi:https://doi.org/10.1300/J056v04n02_04 Crossref, Google Scholar
Coleman, အီး (2015) ။ Impulse / compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး ABC ရုပ်သံ, 259, 93 ။ Google Scholar
Dhuffar, အမ်ကေ, & Griffiths က, အမ် ((2016) ။ ယူကေတွင်အမျိုးသမီးများလိင်စွဲလမ်းမှုကုသမှုကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,5(4), 562-567 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.072 လင့်ခ်, Google Scholar
အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ (2018) ။ သိပ္ပံတစ်လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာရှိပါတယ်။ သဘာဝတရား, 553 (7689), 379 ။ Doi:https://doi.org/10.1038/d41586-018-01051-z Crossref, Medline, Google Scholar
Efrati, Y. , & Mikulincer, အမ် (2017) ။ တစ် ဦး ချင်းစီအခြေခံသည့်မလိုမုန်းထားသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူစကေး - လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအားစစ်ဆေးရန်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အရေးပါမှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 44 (3), 249-259 ။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2017.1405297 Crossref, Google Scholar
Gola, အမ်, Lewczuk, K. , & Skorko, အမ် (2016) ။ အဘယ်အရာကအရေးကြီးသနည်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပမာဏ၏အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကဘာလဲ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များ။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်, 13 (5), 815-824 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.02.169 Crossref, Medline, Google Scholar
Gola, အမ်, Miyakoshi, အမ်, & Sescousse, G. အ (2015) ။ လိင်၊ ထကြွလွယ်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း - လိင်အပြုအမူများတွင် ventral striatum နှင့် amygdala reactivity အကြားဆက်စပ်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ်, 35 (46), 15227-15229 ။ Doi:https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3273-15.2015 Crossref, Medline, Google Scholar
Gola, အမ်, & Potenza, အမ် N. (2016) ။ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကို Paroxetine ကုသမှု - အဖြစ်အပျက်စီးရီး။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်,5(3), 529-532 ။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.046 လင့်ခ်, Google Scholar
Gola, အမ်, & Potenza, အမ် N. (2018) ။ pudding ၏သက်သေပြအရသာ၌တည်ရှိ၏: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောမော်ဒယ်များနှင့်ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ရန်ဒေတာလိုအပ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 47 (5), 1323-1325 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-018-1167-x Crossref, Medline, Google Scholar
Gola, အမ်, Wordecha, အမ်, Marchewka, အေ, & Sescousse, G. အ (2016) ။ Visual လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု - cue သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်? လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ် ဦး နှောက်ပုံရိပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုအနက်ပြန်ဆိုရန်ရှုထောင့်။ လူ့အာရုံကြောသိပ္ပံနယ်ပယ်များ၊ ၁၀၊ ၄၀၂ doi:https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00402 Crossref, Medline, Google Scholar
Gola, အမ်, Wordecha, အမ်, Sescousse, G. အ, Lew-Starowicz, အမ်, Kossowski, ခ, Wypych, M, Makeig, အက်စ်, Potenza, အမ် N. , & Marchewka, အေ (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သလော။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများအတွက် fMRI လေ့လာချက်။ Neuropsychopharmacology, 42 (10), 2021-2031 ။ Doi:https://doi.org/10.1038/npp.2017.78 Crossref, Medline, Google Scholar
Kafka, အမ်ပီ (2014) ။ hypersexual ရောဂါဘာဖြစ်သွားသလဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 43 (7), 1259-1261 ။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-014-0326-y Crossref, Medline, Google Scholar
Klucken, တီ, Wehrum-Osinsky, အက်စ်, Schweckendiek, ဂျေ, Kruse, O. , & Stark, R. (2016) ။ အတင်းအကျပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ပြောင်းလဲ appetitive အေးစက်နှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်, 13 (4), 627-636 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.01.013 Crossref, Medline, Google Scholar
Kor, အေ, Fogel, Y. , Reid, R. C. , & Potenza, အမ် N. (2013) ။ hypersexual Disorder ကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သလား။ လိင်စွဲမှုနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၂၀ (၁-၂)၊ ၁-၁၅ ။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2013.768132 Google Scholar
Kraus, SW, Krueger, RB, Briken, P. , ပထမ၊ MB, Stein, DJ, Kaplan, MS, Voon, V. , Abdo, CHN, Grant, JE, Atalla, အီး, & ရိဒ်, GM (2018) ။ ICD-11 တွင်မဖွယ်မရာလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 17 (1), 109-110 ။ Doi:https://doi.org/10.1002/wps.20499 Crossref, Medline, Google Scholar
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Meshberg-Cohen ကို, အက်စ်, Martino, အက်စ်, Quinones, အယ်လ်, & Potenza, အမ် (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုဂျာနယ်, 172 (12), 1260-1261 Doi:https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15060843 Crossref, Medline, Google Scholar
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Voon, V. , & Potenza, အမ် N. (2016) ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စွဲ, 111 (12), 2097-2106 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/add.13297 Crossref, Medline, Google Scholar
Potenza, အမ် N. , Gola, အမ်, Voon, V. , Kor, အေ, & Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ (2017) ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? အဆိုပါ Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု,4(9), 663-664 ။ Doi:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30316-4 Crossref, Medline, Google Scholar
Potenza, အမ် N. , Higuchi, အက်စ်, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2018) ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုသုတေသနပြုရန်တောင်းဆိုပါ။ သဘာဝ, 555, 30. Doi:https://doi.org/10.1038/d41586-018-02568-z Crossref, Medline, Google Scholar
ရေမွန်, N. C. , Grant က, ဂျေအီး, & Coleman, အီး (2010) ။ compulsive လိင်အပြုအမူကုသရန် naltrexone နှင့်အတူတိုးပွား: တစ် ဦး ကအမှုစီးရီး။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု, 22 (1), 56-62 ၏ရာဇဝင်။ Medline, Google Scholar
ရိဒ်, R. C. , လက်သမား, ခ N. , ချိတ်, ဂျေ N. , Garos, အက်စ်, Manning, ဂျေစီ, Gilliland, R. , Cooper က, အီးခ, McKittrick, အိပ်ချ်, Davtian, အမ်, & Fong, တီ (2012) ။ hypersexual disorder အတွက် DSM-5 ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံစာ။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်,9(11), 2868-2877 ။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02936.x Crossref, Medline, Google Scholar
Stark, R. , & Klucken, တီ (2017) ။ (အွန်လိုင်း) အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံနည်းကျချဉ်းကပ်မှု။ C. Montag & အမ် Reuter (Eds ။ ), အင်တာနက်စွဲ (စစ။ 109-124) ၌တည်၏။ Cham, ဆွစ်ဇာလန်: Springer ။ Crossref, Google Scholar